Sicirada sarrifka lacagaha ah ee suuqa, ganacsiga lacagta dukaanka ah
Sicirrada sarrifka lacagaha ah ee internetka, is-beddel ku yimaad lacag kasta oo dhab ah.
Sarriyadaha dijitaalka ah qiimaha waqtiga dhabta ah, sarrifka lacagaha sarrifka ee internetka 21 January 2020
Bitcoin qiimaha sicirka
Ethereum qiimaha sicirka
Litecoin qiimaha sicirka
XRP qiimaha sicirka
Ethereum Classic qiimaha sicirka
Qiimaha Lacagta digital ee websaydhadu waxay muujinayaan heerka degdega ah ee wax kasta oo lacagta digital ah maanta waqtiga dhabta ah. Heerarka Lacagta digital waxaa loo xisaabiyaa sida celceliska dhammaan isweydaarsiga maanta. Waxaad raaci kartaa dhaqdhaqaaqa heerka sarrifka elektiroonigga ee khadka tooska ah waxaadna ka heli kartaa sicirka sarrifka ugu fiican ee lacagta digital iibsashada iyo iibinta.
Qiyaasta sarrifka ee websaydhkeena waxaa lagu cusbooneysiiyaa khadka tooska ah 30kii ilbiriqsi kasta. Baro heerka sarrifka lacagaha ee crypto lacag la'aan, waqtiga dhabta ah, hadda.
Lacagta loo yaqaan 'Crypto lacagta' waxaa lagu ganacsadaa suuqyada kaladuwan ee crypto iyo isweydaarsiga crypto-kala. Si ka duwan lacagtii caadiga ahayd, qofna ma dhigayo sicirka crypto maanta ama berri. Isweydaarsiga kasta ee lacagaha 'lacagta digital', heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital' wuxuu is beddelaa waqtiyo kala duwan. Si aad si sax ah u fahamto heerka lacagta digital, hadda waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso leh u xisaabiso qiimaha celceliska qiimaha sarrifka ee dhammaan suuqyada crypto.
Websaydhka shabakada 'cryptoratesxe.com' waa tixgelisaa, iyo habka khadka tooska ah, celcelis ahaan isku celceliska tirada tirakoobka ee suuqyada 'aaladaha lacagta' dhammaan suuqyada crypto.
Dhaqdhaqaaqa heerarka lacagta digital ayaa si joogto ah looga ilaaliyaa crypto dhammaan suuqyada adduunka adduunka.
Waxaa jira lacago badan oo loo yaqaan 'aaladaha lacagta' oo aan kulligoodna lagu ganacsan karin isweydaarsiga crypto maalin kasta.
Waxaan la soconaa cida loo ganacsado oo lagu xayeysiinayo suuqa loo yaqaan 'crypto crypto' isla markaana aan u ururin karno qiimaha guud ee loo yaqaan 'lacagta digital rate' oo loogu talagalay dhammaan macaamillada lagu sameeyo dhammaan suuqyada crypto si loo xisaabiyo celcelis ahaan heerka lacagta digital this. Waxaad ka daawan kartaa si bilaash ah heerka sarrifka ee wixii lacagta digital qaraabo la mid ah.
Waad raadraaci kartaa dhaqdhaqaaqa isweydaarsiga hal sarrifka 'lacagta digital' oo qaraabo kale ah adiga oo adeegsanaya astaamaha qofka. Heerka 'crypto' waxaa lagu soo bandhigaa qaab garaafyo iyo lambaro ah, oo ah isbeddelada heerka isbeddelka ayaa lagu soo bandhigayaa qayb gaar ah boqolley ahaan. Kororka iyo hoos u dhaca lacagta ayaa lagu soo bandhigay midabyo kala duwan.
Eeg heerka ugu fiican ee lacagta digital khadka tooska ah.
Heerka ugu wanaagsan ee lacagta digital, dhaqdhaqaaqa kobaca iyo hoos u dhaca heerka lacagta digital waxaa lagu raad heli karaa jaantusyada isbeddelada deg degga ah ee heerka lacagta digital ee ku yaal bogga internetka widgets ama bogagga sarrifka ee bogagga la xushay ee lacagta digital. Mid ka mid ah qaababka loola socdo heerka ugu wanaagsan waa in la ilaaliyo isbedelka joogtada ah ee heerka doorta 'lacagta digital online' iyo marka shaxanka heerka lacagta digital uu muujiyo qiimaha ugu yar, tani waa waqtiga ugu wanaagsan ee wax la iibsado, iyo marka ugu badan - si loo iibiyo crypto .
Dhaqdhaqaaqa guud ee Bitcoin qiyaasta maanta 21 January 2020
Dhaqdhaqaaqa Bitcoin qiyaasta maanta waa macluumaadka ugu weyn ee khadka tooska ah ee dadka intiisa badan ay adeegsadaan. Waxaad ka ogaan kartaa dhaqdhaqaaqa Bitcoin heerka maanta ee wax kasta oo loo yaqaan 'lacagta digital' iyo lacag kasta oo adduunka ah bartayada internetka.
Waxaan tusinaa firfircoonaanta heerka sarrifka lacagaha ee aaladaha lacagta maalin kasta waana ognahay sicirka ma ahan oo keliya maanta, laakiin sidoo kale taariikhda isbeddelka heerka maalin kasta.
Maanta Bitcoin sicirka waxaa la aasaasay iyada oo ay sabab u tahay ganacsiga isweydaarsiga kala duwan muddo waqti ah, taas oo kuxiran xoojinta ganacsiga ganacsiga crypto. Adoo baranaya isbeddelka heerka Bitcoin khadka internetka maalmihii ugu dambeeyay, waxaad saadaalin kartaa qiimaha lacagta digital maanta.
Dhaqdhaqaaqa guud ee Ethereum qiyaasta maanta 21 January 2020
Dhaqdhaqaaqa guud ee heerka Ethereum maanta - celcelis ahaan Ethereum hadda wuxuu ku jiraa dhammaan ganacsiyada suuqa caalamiga ah ee loo yaqaan 'crypto crypto', kaas oo isla markiiba lagu soo bandhigo internetka. bartayada internetka. Dhaqdhaqaaqa guud ee Ethereum sicirka doolarku wuxuu go aansadaa sicirka Ethereum qiimaha lacagaha kale iyo aaladaha lacagta.
Dhaqdhaqaaqa guud ee Litecoin qiyaasta maanta 21 January 2020
Dhaqdhaqaaqa heerka Litecoin qadka qadka maanta - celceliska celceliska Litecoin) hadda wuxuu joogaa sarrifka crypto, kaas oo isla markiiba lagu soo bandhigo barta internetka. .
Dhaqdhaqaaqa guud ee Litecoin sicirka doollar wuxuu sidoo kale go'aamiyaa isbeddelka heerka Litecoin lacagaha kale iyo aaladaha lacagta.
Dhaqdhaqaaqa guud ee XRP qiyaasta maanta 21 January 2020
Dhaqdhaqaaqa guud ee heerka XRP maanta qadka qadka - celceliska XRP heerka hadda wuxuu ku jiraa ganacsiga crypto. Raadinta heerka sarrifka laba jeer daqiiqaddii waxay kuu oggolaaneysaa inaad muujiso dhaqdhaqaaqa dhabta ah ee sicirka crypto.
Dhaqdhaqaaqa guud ee heerka XRP doolarka doolar wuxuu kaloo go'aamiyaa isbeddelka heerka XRP dhammaan lacagaha kale ee adduunka.